Ukutya kuka-Angela kuVictoria's Secret - ukukhupha i-7 kg ngeentsuku ezili-10-13! Iingelosi zokutya: imenyu, ukuphonononga
Midlalo Ukutya Ukulahlekelwa ngumzimba Ukutya kweenkwenkwezi
Ukutya kweengelosi ezivela ku-Victoria Secret - ilungu elifanelekileyo kwiintsuku ezili-13!
Kwiiveki ezi-2 phambi kohlobo lwefashoni, iimpawu ezidumileyo zeVictoria's Secret zihlala kwi-Angel's special diet. Isicwangciso sakhe sokutya sisekelwe kwi-protein enkulu kunye nemifuno, ngelixa iiskese ziza kufuneka zilahlekelwe ngokupheleleyo. Kodwa yicinge nje-i-steak yeruba kwi-grill kunye ne-pirozhenka enobuhlungu ... ufuna ntoni ngaphezulu? Isidlo sikaVictoria's Secret Secret sineziqulatho ezilungileyo zenyama kunye nezonka ezivuthiweyo ze-vitamin - ukuthanda kukaThixo, akunjalo?
Ukutya kunokunyanzeliswa ngokunyanzeliswa ngabantu abafuna ukutya kakuhle ebusuku, kwaye kusasa kusasa ngekhobe yekhofi. Akulungelanga kakhulu abantu abaneengxaki zesibindi kunye neengtso, i-pancreas kunye nesimo se-metabolism esibi.
Iziphumo zesondlo zengelosi zi-7 kg ngeentsuku ezili-10-13.
Yintoni yokutya kweengelosi eyiluncedo kwaye eyingozi kumzimba?
Ngelishwa, ukutya kunye negama likaThixo akunakubizwa ngokuba yi-extrapolous, kodwa kuyingozi. Umgca phakathi "musa ukulimaza" kwaye "ukufikelela kwibhalansi" akucaci kakhulu. Phakathi kwezibonelelo esiziphawulayo:
Uhlanza isicatshulwa esiswini kwi-slags;
I-Normalizes yomsebenzi wendlela yokutya ngenxa yexabiso elikhulu le-fiber kwimenyu;
Ukusetyenziswa kwimihla ngemihla kwimizi izalisa umzimba ngexabiso lama-vithamini;
Iikroti kunye netamatato ziphucula imeko kunye nombala wesikhumba;
Ukungalingani kweekhalori ngenxa yokunqongophala kwama-carbohydrates kuyahlawulwa ngeprotheni.
Iingxaki ze-Angela Victoria's Secret food ekusebenziseni ngokugqithiseleyo iproteinyini yezilwanyana. Ngokungaqhelekanga kulokutya kuza kubonakala ukuba umzimba uyadumala kunye nombane phakathi kwezulu, isibindi kunye neentso ziya kuthatha yonke into. Iprotheni eyongeziweyo inobungozi kwimpilo. Ukuba awuyisebenzisi ngokuzivocavoca umzimba, iimveliso zokubola ziza kutyhekeza umzimba. Ngoko ke, abo bagqiba ukuzama ukutyhila imodeli yeeNgelosi, kubalulekile ukubandakanyeka kwimpilo okanye kwi-aerobics.
Enye into engathandekiyo kukuba ubuthakathaka obungapheliyo ngenxa yokungabikho kwe-glucose. Oogqirha basabela ngokungathandabuzekiyo malunga nokubulawa okusemzimbeni kwaye batusa ukuba badle iispuni enye okanye ezimbini ngosuku. nobusi. Le dosi ayiyi kulimaza inqeni yakho, kodwa impilo yakho iya kuphucula.
Ukutya kweengelosi: imenyu yeveki
Ukutya kwasekuseni: itiye eluhlaza / ikhofi ngaphandle kwamnandi;
Ukutya: amaqanda ama-2 aphekiweyo aphekiweyo, isaladi yemifuno kunye nemifuno kunye neerato;
Ukutya isidlo: inyama yenkomo okanye i-steak kwioli yeoli, i-smoothies ukusuka kwipinashi.
Ukutya kwasekuseni: ikhofi / itiye kunye ne-croutons (i-1-3 pieces);
Ukutya: inxalenye enhle yenyama yenyama yenkukhu kunye nesaladi eluhlaza;
Isidlo: isobho semifuno kunye namazambane.
Ixesha lesidlo: inyama yenkomo ebisiweyo kwi-griddle eyomileyo okanye i-grill, isaladi eluhlaza;
Ukutya isidlo: 2 amaqanda abilisiwe, ii-2 zeetayi kunye nesaladi yemifuno.
Ukutya: i-steak enkulu, isaladi ye-Peking iklabishi, imifino kunye ne-tomato;
Ukutya isidlo: ii-2 zemihlaba ye-ham, amaqanda ama-2 abilisiwe.
Ukutya kwasekuseni: i-kroti enkulu eluhlaza, enexesha elinomsola welamula;
Ixesha lesidlo: iintlanzi ezixhambileyo zokuthambisa, ukugcoba okanye kwi-oven kunye nemifuno;
Ukutya isidlo: inxalenye yenyama ebilisiwe kunye nesaladi yemifuno.
Ukutya: Inkukhu etyongweyo, imifino yomvuzo;
Ukutya isidlo: i-steak kunye neetatato.
Ukutya kwasekuseni: itiye eluhlaza okanye ikhofi ngaphandle kweshukela;
Ukutya: inyama nayiphi na i-tomato kunye nemifuno;
Ukutya isidlo: ushizi, isaladi.
Ngeveki yesibini, phinda ukutya okufanayo, kodwa iintsuku ezi-6 kuphela. Iintsuku zeveki zivunyelwe ukuba zitshintshwe.
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngama-13 kg kwiintsuku ezingama-7 kwi-Angel's diet?
Amantombazana e-Angelica uVictoria Imfihlo bayakuvuyela ukwabelana ngeemfihlelo zendlela yokulahlekelwa iipounds ezininzi ngexesha lokutya. Iingxelo zokulahleka kwesisindo ziqinisekisa ukuphumelela. U yifunde?
Ungabandakanyi ityuwa, ubhiya, isoda, ushukela kunye notywala ngokubanzi;
Ukuhlobisa inyama kukuluhlaza, kwaye kufuneka kube ngaphezu kokudla;
Isipinashi kunye nesalathisi eseluhlaza eluhlaza kuyo yonke imifuno eluhlaza, kunye ne-parsley, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, i-leek, i-Peking iklabishi kunye ne-broccoli;
Utamatato kunye ne-karoti, ikhofi kunye ne-tea ehlaza kuyatshintshana;
Ukugqoka i-saladi: 1 tsp. ioli yomnquma kunye nejisi lemon. I-pepper emnyama kunye ne-basil zikhethiweyo;
Ukugcina ngokugqithiseleyo urhulumente wokusela - ii-2 ilitha ngosuku lwamanzi acocekileyo. Yenza i-teas ye-herbal kwi-mix you rock you favorite (ngaphandle kwamnandi!);
Njengoko utywala utywala i-smoothies eluhlaza, i-kefir i-2.5%, kukho iipulole ezimuncu;
Ukubandakanyeka kwimidlalo, yenza umzimba ekuseni kwaye ujonga ebusuku;
Yonke imihla, udle 3-4 ama-walnuts okanye umgca womsedare.
Isitoreji kunye nomonde weengelosi kwaye uzuze amakhilogremu angaphezulu!
Ukutya kukaJeannene Friske
Ukutya kukaOlga Buzovoy
Ukutya kwe-Hollywood uJulia Roberts
Indlela yokukhetha i-heater efanelekileyo
Ioli ye-Ginger nge pepper kunye ne-thyme
Ingcamango ye-fibrosis kunye neendlela zokonyango
I-Salad esuka kwi-cocktail yase-sea
Iimpawu zokuqala zeKrisimesi ngezandla zakho
Macaroni kwiNavy nge-multivariate
Indlela yokuhlakulela intshutshiso?
Amadoda ebomini uMichelle Mercier
Ukubunjwa kwezilumbiso zokuzicoca
Imveliso yobisi yobutyebi: ukutya kunye nexabiso lokutya